Nri Cat, Maile Ohye na Aka Enwe | Martech Zone
Achịcha Cat, Maile Ohye na Enwe Aka
Thursday, August 23, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Dị nnọọ natara a email:
Anụrụ m ka Douglas na-ekwu okwu na Blog Indiana banyere otu esi eme ya SEO anwuola na isiokwu adịghị mkpa dị ka ọ dị na mbụ. Kedu ka ị si eme ka ndị ahịa kwenye nke a? Ga-enwe mmasị na gị.
Mara: Ọ bụ ezie na isi okwu abụghị as mkpa… ọ ka d ị mkpa iji akara ngosi ziri ezi. Anyị na ndị ahịa anyị na-anọ ogologo oge na nyocha isiokwu. The slide m na-akọrọ na-ege ntị na-egosi na ị ga-eji ziri ezi isiokwu (na mkpoputa) bụ pusi achịcha vesos cat ozuzu. Nke a bụ pusi nri:
Na-eme ka ndị ahịa na-aghọta na isiokwu itinye n'ọrụ abụghị dị ka ihe dị mkpa ka sie ike. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ọchụchọ na-agbanwe agbanwe mgbe niile na algọridim ha, ụlọ ọrụ anaghị adị ngwa ịnabata. N'ime ụlọ ọrụ SEO, anyị na-ele anya ma na-etinye mgbanwe ozugbo ka ndị ahịa anyị nwee ike leverage ọchụchọ wee nọrọ n'ihu asọmpi ahụ. Ọ bụrụ na ndị ahịa gị ekwetaghị gị, m ga-akwado ụzọ abụọ.
Nke mbụ, nara ndụmọdụ site na Google. Maile Ohye bụ onye njikwa ngwaahịa ọchụchọ na Google ma gosipụta mmejọ nkịtị ndị ahịa na-eme mgbe ọ na-abịa njikarịcha njin ọchụchọ. You'll ga-achọpụta nke ahụ Keywords anọghị na mkparịta ụka ahụ! Mmehie ha na-eme bụ enweghị uru bara uru, enweghị ụzọ nkewa, na-eji arụ ọrụ, na-a payingaghị ntị na usoro SEO na nwayọ nwayọ.
Ọ dị mma… Google kwuru ya na ị kwuru ya, mana onye ahịa gị ekwetaghị ya. Ihe na-esote bụ aka aka obibia. A aka aka bụ eriri eriri pụrụ iche ejiri na njedebe nke eriri. Na Navy, mgbe ụgbọ mmiri ga-abịa arịlịka, ị ga-atụba ọkpọ aka n'akụkụ mmiri ebe mmadụ ga-ejide ya ma dọpụta ụdọ ahụ. Na njedebe nke eriri ahụ bụ nnukwu eriri arịlịka ahụ. Younweghị ike ịtụba nnukwu eriri, yabụ ị ga-amalite site na obere eriri. Tụọ onye ahịa gị aka aka tupu ị chọọ ịtụba ha nnukwu eriri.
Melite a ule na ha ebe ị na-ebuli 10 ẹdude blog posts site iji Keywords nke oma. Chọta 10 posts ebe ị nọ n'ọkwá ma ọ bụghị ogo nke ọma maka isiokwu enyere. Mee ka isiokwu ndị ahụ dị mma, jiri ha na utu aha, chọta ihe oyiyi ebe ị nwere ike iji ha na mkpado ederede ọzọ, jide n'aka na ị nwere 3 ka 4 kwuru na ederede iji melite njupụta isiokwu. Lelee oge ị na-eji njikarị ihe ndị ahụ, chere izu 4 ma tụọ nsonaazụ gị na nyocha gị.
Mepụta ule ebe ị na-ede akwụkwọ ntanetị ọhụrụ 10 dị egwu. Jiri onyonyo mara oke - ikekwe foto ndị ahịa ma ọ bụ foto onyonyo mara mma, dee aha ndị na-adọrọ adọrọ ka ị gụkwuo, ma dee akụkọ ndị ahịa ma ọ bụ ndụmọdụ ndụmọdụ ga-enyere ndị ahịa gị aka Eleghara ojiji isiokwu… eleghara ha anya kpam kpam. Kesaa ọrụ na Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, StumbleUpon na ebe ọ bụla ọzọ ị nwere ike. Bido ụfọdụ mkparịta ụka. Soro oge ị na-eji, chere izu 4 ma tụọ nsonaazụ gị na nyocha gị.
Site n’ilekwasị anya n’ebe onye ahịa gị na ọdịnaya ya dị kama nke isiokwu ahụ, enwere m obi ike na ị ga-ahụ na nhọrọ nke abụọ ga-akarị nke mbụ nhọrọ oge ọ bụla. Anaghị m adụ onye ọ bụla ọdụ ka ọ kwụsị njikarịcha, ihe m kwuru bụ na mgbe ị kwụsịrị ilekwasị anya na usoro nke njikarịcha njin ọchụchọ na, kama, tinye mgbalị gị n'ime nnukwu ọdịnaya na nkwalite nke ọdịnaya ahụ - ị ga-emeri oge ọ bụla!
Crawlers na bots anaghị azụta ngwaahịa na ọrụ gị, ndị mmadụ na-azụ ya. Mgbe ị gbanwere ụdị gị iji gwa crawler ma ọ bụ bot, ị ga-efu ndị ahịa.
Tags: isiokwuisiokwu ojijimaile ohyeenwe ọkpọsearch engine njikarịchaA
Nkwurịta okwu na Nzipụta